यी महिलाले काठमाडौँमा यस्तो विस्वासै नलाग्ने काम गर्दै, प्रहरीनै परे तिनछक्क !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी महिलाले काठमाडौँमा यस्तो विस्वासै नलाग्ने काम गर्दै, प्रहरीनै परे तिनछक्क !!
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक महिलाबाट महिला बलात्कार हुनसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। अनौठो तथ्यसहित जिल्ला अदालत सङ्खुवासभा हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फौजदारी विधिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेको हो।नेपाल सरकार वादी भई लाक्पा शेर्पाविरुद्ध दायर उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले परिचय लुकाई कृत्रिम
लिङ्ग प्रयोग गरी प्रेमिका बनाएकी बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। अदालतको ठहर अनुसार प्रतिवादी लाक्पा शेर्पालाई सात वर्ष कैद सजाय पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ।संयुक्त इजलासले मुलुकी ऐनसँगै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले महिलाबाट महिला बलात्कार हुनसक्ने अवस्था रहेको व्याख्या गरेको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
लाक्पा र यमुनाको योजना अनुसार नै विवाहको योजना अगाडि बढेको थियो।भोलिपल्ट समाजमा कुरा चल्यो यमुनाको प्रेमी केटा हैन केटी हो। सुरुमा पत्यार नभए पनि लाक्पाको शरीर परीक्षण भयो। शरीर परीक्षणमा लाक्पा केटी भएको प्रमाणित भएपछि उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र मानव बेचबिखनमा मुद्दा चल्यो।
सडक अनुगमनका लागि गएका, स्थानीय गर्जिएपछि माधव नेपाल यसरी फुत्त गाडीभित्र पसे… (भिडियो सहित)
विरामी आमालाई अस्पताल भर्ना गरेर होेटलमा बस्न गएका भारतीय सैनिक हिमबहादुरको अचानक भयो मृत्यु